China Standing Glass Weight Scale CW269 ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံ | AOLGA
• 30CM*30CM အရွယ်အစားကြီးသောမှန်ပလက်ဖောင်း၊ အလေးချိန်အတွက်ရပ်တည်ရန်သက်တောင့်သက်သာ ရှိ၍ ခြေဖဝါးအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသောလူအများစုအတွက်သင့်တော်သည်။
မြင့်မားသောအာရုံခံကိရိယာ ၄ ခု
•စကေးပေပေါ်တွင်မြင့်မားသောအာရုံခံကိရိယာ ၄ ခုသည်မြင့်မားသောတိကျမှုနှင့်သေးငယ်သောအမှားကိုယူဆောင်လာသည်။
မမြင်နိုင်သော LED display
•မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိမမြင်နိုင်သော LED display ကို သုံး၍ မရသောအခါ LED မီးလုံးကိုမြင်နိုင်ပြီး၎င်းသည်ပိုမိုသန့်ရှင်းစေသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်အဖြူရောင်စကေးသည်အဖြူရောင် LED နှင့်အနက်ရောင်စကေးသည်အနီရောင် LED တို့နှင့်ရှိသည်။
ဘွဲ့ရတန်ဖိုး ၁၀ ဂရမ်သာရှိသောရေတစ်ခွက်ကိုတိကျစွာအာရုံခံနိုင်သည်။
•မြန်နှုန်းမြင့်စစ်ဆင်ရေး၊ စောင့်ဆိုင်းမှုမရှိ၊ ပိုမိုထိရောက်သောစွမ်းဆောင်ရည်။
• Hidden LED display၊ နေ့ရောညပါကြည်လင်စွာဖတ်ပါ။
•အလိုအလျောက် switch သည် manual switch ဒီဇိုင်းကို ကျော်လွန်၍ အဆင်ပြေပြီးစွမ်းအင်ချွေတာသောအသိဥာဏ်ဆွဲအားအာရုံခံကိရိယာသို့အဆင့်မြှင့်တင်သည်။
•လက်ရာသေသပ်လှပသော၊ ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်၊ ပိုသက်တောင့်သက်သာရှိသောအလေးချိန်။
•လေးပွိုင့်အပြင်အဆင်နှင့်တံတားအမျိုးအစားချိတ်ဆက်မှုသည် ပို၍ ပင်အင်အားဖြစ်စေသည်။
၁။ လက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြီးမားသောလုံးဝန်းသောထောင့်များ၊ ချောမွေ့ပြီးနူးညံ့သိမ်မွေ့သော၊ တိုက်မိပျက်စီးမှုကိုလျှော့ချသည်။
2. Anti-slip foot pads များနှင့်ဆွဲငင်အားနိမ့်သောရော်ဘာအလေးချိန်များကြောင့်ခြေဖဝါးများကိုပိုမိုတည်ငြိမ်စေပြီး anti-skid ကိုနှစ်ဆလုံခြုံမှုရှိစေသည်။ အဓိကအစိတ်အပိုင်းများကိုပိုမိုအသက်ရှည်ရန်ကာကွယ်ပေးသည်။
3. Polymer ပစ္စည်းကိုအောက်ခြေတွင်ထားပါ။
4. အစိတ်အပိုင်းများကိုပုံသွင်းခြင်း၊ ဖုန်မှုန့်နှင့်အစိုဓာတ်ကိုအဓိကအစိတ်အပိုင်းများကိုကာကွယ်ရန်
• Architectural grade thickened toughened glass သည်ကောင်းသောသက်ရောက်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီးဖိအားမြင့်ခုခံနိုင်စွမ်းရှိသည်။
မမြင်နိုင်သော LED display； အလိုအလျောက်ချိန်တွယ်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်း power စွမ်းအားနိမ့်ခြင်းနှင့်အ ၀ လွန်ခြင်းအချက်ပြမှု high မြင့်မားသောတိကျမှုအာရုံခံကိရိယာ ၄ ခု； ပေါင်းစပ်အလေးချိန်မျက်နှာပြင်； ပေါ့ပါး။ ကျစ်လျစ်ပြီးရိုးရှင်း
2x1.5V AAA ဘက်ထရီ
ယခင်: အလိုအလျောက်လျှပ်စစ်အလေးချိန်စကေး ZW320
နောက်တစ်ခု: Glass Electronic Weight Scale CW280 ဖြစ်သည်
BLDC မော်တာဆံပင်အခြောက်ခံစက် ...
Glass Electronic အလေးချိန် ...